အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: ဘယ်သူ. မှာတာဝန်ရှိပါသလဲ
... 9:42:00 AM
ကျွန်မကတော့ ဟိုးအရင်တည်းက အမှိုက်ပစ်ရတာ ရှက်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာလဲ ကိုယ်နဲ့ သွားတဲ့သူက အမှိုက်ပစ်ရင် ရှက်လို့ မဆုံး သူ့ ကိုလည်း ပြောလို့ မဆုံးဖြစ်မိတယ်။
21 May 2009 at 10:31 PM
21 May 2009 at 11:14 PM
ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် တယောက်ချင်းပြုပြင်သွားရင် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ..
22 May 2009 at 10:45 AM
လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒဏ်ကြေး သတ်မှတ်ရင်လည်း ဒဏ်ငွေကောက်တဲ့သူ တာဝန်ယူမယ့် လူကြီးတွေလည်း သမာသမတ် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ငါ့အမျိုး ငါ့တူမို့လို့ မျက်စိမှိတ်ထားမယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လို့မရပါဘူး။
တိုက်အပေါ်ထပ်က လူတွေလည်း ဘယ်သူမှ မမြင်ပါဘူးလေ ဆိုပြီး လစ်သလို ပစ်ချနေတာတွေလည်း ပြင်သင့်ပါတယ်။ တိုက်အောက်က သူတွေပဲ ခံရတာ ငါတို့ ခံရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ပြင်သင့်ပါတယ်။
22 May 2009 at 9:46 PM
23 May 2009 at 10:27 PM
မိုးခါးရေ အားလုံးဒီလို တွေးမိရင်ကောင်းတာပေါ့
July ရေ မှန်တာပေါ့ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းက ကိုယ်နဲ. လွတ်ပြီးရော ဆိုတော့
ကိုသားထူးရေ ကျေးဇူးပါ ၊ ဒါပေမယ့် သတိတော့ထား အဆဲခံရနိုင်ပါတယ် ဟာဟ
29 May 2009 at 9:39 AM